Bepa Redzokororo - Shona
Bepa Redzokororo - Shona : Question 1 of 9
Mukomana -----------akatora mabhuku ose. Mukomana -----------akatora mabhuku ose.
Mudzidzisi wake anopa dzidziso ------------- Mudzidzisi wake anopa dzidziso -------------
Ndinoda nyama ------------ Ndinoda nyama ------------
Aka --------zviyo nerusero rwavatete. Aka --------zviyo nerusero rwavatete.
Sarudza izwi rinopikisana nerakanyorwa nemavara MAKURU.
Maitiro aTapiwa ndeeUNGWARU chaiwo. Maitiro aTapiwa ndeeUNGWARU chaiwo.
Ambuya vaSVIPA mushonga wavaive vanwa. Ambuya vaSVIPA mushonga wavaive vanwa.
Apa paita zveRUME rakasviba. Apa paita zveRUME rakasviba.
Verenga tsamba inotevera ugopindura mibvunzo zvizere.
Private Bag 9046
21 Kubvumbi 2008
Ndanyora tsamba iyi mushure megore taparadzana.
Iye zvino ndiri kudzidza pachikoro chiri pamusoro icho. Ndiri murugwaro rwechitanhatu. Handisati ndave neshamwari pachikoro pano. Iwe ndiwe shamwari yangu yepamoyo. Zvidzidzo zvose zviri kundiomera kunyanya Chirungu. Iwe uri kuitawo zvakanaka here? Ko, unofara here? Unouya kuno riini? Ndikawana mari ndichauya kuMasvingo muna Zvita. Upindure tsamba iyi nokukurumidza. Ndini shamwari yako Zodwa
Tsamba iyi yakanyorwa riini? Tsamba iyi yakanyorwa riini?
21 Kubvumbi 2008 21 Kubvumbi 2008
21 Kubvumbi 2007 21 Kubvumbi 2007
20 Kubvumbi 2008 20 Kubvumbi 2008
15 Kubvumbi 2007 15 Kubvumbi 2007
Munyori wetsamba iyi anogara kupi? Munyori wetsamba iyi anogara kupi?
Vasikana ava vakanga vave ne ----------vaparadzana. Vasikana ava vakanga vave ne ----------vaparadzana.
mwedzi gumi mwedzi gumi
makore matanhatu makore matanhatu
Zodwa aiwa asati ava nei pachikoro? Zodwa aiwa asati ava nei pachikoro?
Tsamba iyi ndeye -------- Tsamba iyi ndeye --------
kutsvaga basa kutsvaga basa
kutsvaga nzvimbo kutsvaga nzvimbo
kutsvaga zvinhu zvakarasika kutsvaga zvinhu zvakarasika
kusimbisa ushamwari hwakare kusimbisa ushamwari hwakare
Verenga ndima inotevera ugopindura mibvunzo
Vana vanhasi ukavati vatore mutsubvu vavese moto vanoti hatizvizive. Kwavari moto unoveswa nemachesa chete. Izvo zvokutora zvitanda zviviri zvomutsubvu nouswa vosika moto wopfuta kwavari chisionekwi mudzi webwe. Vanokanganwa kuti pasichigare machesa yainge isiko asi moto waiveswa. Waiona vakuru vachishandisa moto mumvuto dzavo dzaigadzirwa nematehwe emhuka vopfura mapadza nemapfumo. Vamwe ndivo vaishandisa moto kugocha nyama nduru yemhuka yoshandiswa semunyu.
Muti unoshandiswa pakukwenya moto ---------------- Muti unoshandiswa pakukwenya moto ----------------
Chii chiri kunzi chisionekwi mudzi webwe? Chii chiri kunzi chisionekwi mudzi webwe?
moto wemvuto moto wemvuto
moto wemazimbe moto wemazimbe
moto wemachisa moto wemachisa
moto wemutsubvu moto wemutsubvu
Mvuto yaigadzirwa nei? Mvuto yaigadzirwa nei?
nedehwe remhuka nedehwe remhuka
nezvitanda zvenutsubvu nezvitanda zvenutsubvu
Chii chaishandiswa semunyu mukugocha nyama? Chii chaishandiswa semunyu mukugocha nyama?
Mvuto inoshandiswa ku ------------ Mvuto inoshandiswa ku ------------
gocha nyama gocha nyama
pfura simbi pfura simbi
vesa moto vesa moto
sukuta matehwe sukuta matehwe
Nderipi izwi riri mundima rinoreva makare kare? Nderipi izwi riri mundima rinoreva makare kare?
pasi pachakarohwa nenyundo pasi pachakarohwa nenyundo
Ndezvipi zvinhu zviviri zvanzi zvinopfuurwa? Ndezvipi zvinhu zviviri zvanzi zvinopfuurwa?
mapadza nemapfumo mapadza nemapfumo
mapadza nematehwe mapadza nematehwe
mapfumo nemvuto mapfumo nemvuto
mapfumo nemoto mapfumo nemoto
Vanhu vaidya chii pavaipfura? Vanhu vaidya chii pavaipfura?
Verenga ndima iyi ugopindura mibvunzo
Kubva zvakatanga Runesu kudzidza paGwenhoro School, zvinhu hazvina kumufambira zvakanaka. Aive asina hembe dzokupfeka, mabhuku okunyorera, mari yechikoro nepekugara pakanaka. Aiva afirwa nevabereki vake achiri rushiye. Aitochengetwa naambuya mai vaamai vake. Ivo mbuya vake vaidyawo nhoko dzezvironda. Vaipona nekupemha kana kuita maricho papurazi raSmith. Ukuwo zvidzidzo zvose zvaive zvakaomera Runesu kunyanya chirungu nemasvomhu.
Runesu aive ----------- Runesu aive -----------
Zvinhu zvaishaikwa naRunesu zvaive zvingani? Zvinhu zvaishaikwa naRunesu zvaive zvingani?
Rushiye zvinoreva --------- Rushiye zvinoreva ---------
mwana umwe mwana umwe
mwana mucheche mwana mucheche
Mbuya vaRunesu vaive -------- Mbuya vaRunesu vaive --------
mai vaamai vake mai vaamai vake
mai vababa vake mai vababa vake
mai vomudzimai vake mai vomudzimai vake
mai vatete vake mai vatete vake
Munhu anodya nhoko dzezvironda akaita sei? Munhu anodya nhoko dzezvironda akaita sei?
munhu nanenge ane chirwere munhu nanenge ane chirwere
munhu uya anotambura zvikuru munhu uya anotambura zvikuru
munhu anokara muupenyu munhu anokara muupenyu
munhu anenge ari nyope huru munhu anenge ari nyope huru
Kubva mundima ndiani aipemha? Kubva mundima ndiani aipemha?
Runesu aidzidza kupi? Runesu aidzidza kupi?
Isa mazita anotevera muuzhinji
Chipo akanzi neigo---------pahuma ndokuchema. Chipo akanzi neigo---------pahuma ndokuchema.
Muvhimi akaona mubako makati ----------kusviba ndokutya kupindamo. Muvhimi akaona mubako makati ----------kusviba ndokutya kupindamo.
Mukomana akavhunduka vhudzi rake ndiye ----------kumira. Mukomana akavhunduka vhudzi rake ndiye ----------kumira.
Zadzisa tsumo idzi
Tsuro haiponi ---------
Zadzisa nedimikira rakakodzera
Sarudzai haakurumidzi kutsamwa nokuti ane --------- Sarudzai haakurumidzi kutsamwa nokuti ane ---------
moyo murefu moyo murefu
moyo mukukutu moyo mukukutu
moyo mutete moyo mutete
Tambudzai paakasekwa neshamwari dzake ----------------- Tambudzai paakasekwa neshamwari dzake -----------------
akaita chioko chegudo akaita chioko chegudo
akaita mawiramombe akaita mawiramombe
akaisa muromo mumhino akaisa muromo mumhino
akapeta muswe akapeta muswe